သက်မွန်ရဲ့ သဘောက တစ်ယောက်တည်း ထင်းနေတာကို မကြိုက်ဘူး။ ဖက်ရှင်က မင်းသမီးလုပ်လာတဲ့အခါမှာ လိုက်လျော ညီထွေအောင်တော့ လုပ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သက်မွန် ရဲ့ ပြဿနာက. . . Read More
မြန်မာပြည်မှာရတဲ့ Star Awards ဆုက ပထမဆုံးဆုပါ ဆိုတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း
မြန်မာပြည်မှာက အပြင်သွားရင်တစ် ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို တွေ့ရင် သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က နှုတ်ဆက်လိုက် ရင် သူတို့ကပြန်ပြီး ရယ်ပြတယ် ပြုံး ပြတယ် ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်. . . Read More
ဒီကားလေးမှာ ကိုနေ တိုးနဲ့အတူတူ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါ ကိုနေတိုးဆီက ပညာတွေလည်း ရ တယ်။ အစကတည်းက ကိုနေတိုးက အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အစ် ကိုဆီက ပညာတွေ အများကြီးရပါ တယ်. . . Read More
ဒီကလေးဟာ တအား သနားဖို့ ကောင်းတယ်။ မိဘတွေ အဝေးတစ်နေရာရောက် နေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့တစ်ယောက် တည်း ရပ်တည်ရတာလေ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ အထီး ကျန်တယ်လေ။ အနုပညာအလုပ်ကို တော့ သူလုပ်မှာ ပါ. . . Read More
မြန်မာပြည်ထဲက မီဇာတ်ကားကို ရွေးလိုက်တာပါ။ မလေးရှားမှာပြုလုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျတော့ ပြပွဲရော၊ ပြိုင်ပွဲရောပါ။ ဆုလည်းပေးတယ်။ လန်ဒန်မှာတော့ ဆုမပေးပါဘူး။ ပြပွဲသက် သက်ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. . . Read More
ဦးဂိုအင်ကာ တရားစခန်းက အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်ပြောပြတဲ့ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်
လူတစ် ယောက်ဆီ၊ တစ်ယောက်ဆီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Vibration တွေရှိတယ်။ အရမ်းမြန်တယ်။ ပူ လောင်တယ်။ အေးချမ်းတယ်။ ဂုဏ်ရည်တို့ အဲဒီ Vibration တွေကိုခံစားရင် စိတ်ငြိမ်အောင် ထိုင်တာပါ. . . Read More
သြဂုတ် ၁၃ ရက်နေ့ထုတ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး
"အယူတော် မင်္ဂလာ ရုပ်ရှင် ဇာတ် ကားက အဖွဲ့လိုက် ပုံစံနဲ့သွားရမယ့် ဇာတ် မျိုးပေါ့။ မင်းသမီးရဲ့ အဖေဖြစ်သူ သူဌေး ကြီးကို သူ့ဆီ က နေ ပိုက်ဆံလိမ်ဖို့ အတွက် ကို .....
အမှားတွေကို ထောက်ပြ ဝေဖန်ပေးနိုင်ပါတယ် ပိုးအိအိခန့်
"ဒီဇာတ်ကားက ကြီးမားတဲ့ လိမ်လည်မှုတွေကို ပြုလုပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကို ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကား တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ညီမ အတွက် ပထမဦးဆုံး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပါ။ အဓိက…
“နှစ်ဦး သဘောတူ နားလည်မှု နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲ လိုက်တာပါ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း”
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ကိုဥက္ကာမြင့်ကြူ နဲ့ စိတ် သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် နှစ်ဖက် အသိသက်သေ လူကြီးများ ရှေ့မှောက်မှာ စက် တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့က နှစ် ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းပြတ်စဲ…
သိပ်မကြာခင် လူငယ်စုံတွဲတွေ ကြားမှာ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းမယ့်နေ့ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Valentine's Day က ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Valentine's Day အပေါ် ခံစားချက်တွေအကြောင်း အခုလိုမေးမြန်းထားပါတယ်။
''ဒီနှစ်မှာ အမွန်းအကယ်ဒမီပွဲတက်မှာပါ။ အမွန်းတွက် ပထမ ဆုံးတက်ဖြစ်တာပါ။ ရင်ခုန်တာကတော့ အမွန်းရင်ခုန်ပါတယ်။ ဇာတ် ကားတိုင်းကိုအားပေးဖို့၊ အနုပညာမောင်နှမတွေ အားလုံးကိုအားပေးဖို့ ရှိနေမှာပါ။ အမွန်းကို ပရိသတ်တွေက အရင်သီချင်းရေးတာ သီချင်းဆို တာနဲ့အားပေးကြတယ်။ အခု ရုပ်ရှင်ကားထွက်လာတော့...
''အဓိက ကတော့ပရိသတ်အားပေး မှုပဲပေါ့နော်။ အရင်က ကျွန်တော် တုိ့ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သောမိန်းမများ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားထွက်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတော်တော်ရလိုက်တဲ့အတွက် ဒီကားလေးကို ထပ်ပြီးရိုက်တာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီကား ထဲက ကာရိုက်တာက တောသားလူလည် ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အပြင်မှာလည်း…
''ဒီလိုမျိုးပေါကားတွေလို့ တချို့ သူတွေက ပြောကြ တယ်။ မကြီး ပြောပြမယ်။ ကားတွေကို ကြည့် ကြည့်။ အနုပညာပိုင်းမှာ အားလျော့တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ခေတ်ကာလက မတူကြဘူးလေ။ ခေတ်တွေက ပြောင်းလာ တယ်။ မကြီးတို့ ငယ်ငယ်က…
မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံး(ဗဟို)၏ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရသော စတီရီယို၊ မိုနို ပြဿနာ
''တကယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မရှင် ဆိုတာရှိတယ်။ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးကော်မရှင်က ပွဲပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဒီဂီတအစည်းအရုံးကို ဆက်သွားတယ်လေ။ ဆက်သွားတဲ့အခါမှာ ကော်မရှင်ကိုဖျက်ရတော့မယ် ဆိုပြီးတော့ ဂီတအစည်းအရုံးက မှတ်တမ်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်။ ကော်မရှင်ကကျတော့လည်း ဂီတ အစည်းအရုံးကို တချို့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့အနေနဲ့ စိတ်မချဘူး။…
ဂျင်းကောင်ကာရိုက်တာကို အသက်ကြီးမှပဲ ပြန်ရိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ မြင့်မြတ်
အရင်က ကျွန်တော်တုိ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သောမိန်းမများ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားထွက်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတော်တော်ရလိုက်တဲ့အတွက် ဒီကားလေးကို ထပ်ပြီးရိုက်တာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီကားထဲက ကာရိုက်တာက တောသားလူလည် ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အပြင်မှာလည်း ကိုဂျော့စိန်ဆိုတဲ့လူက တကယ်ရှိတယ်။ အပြင်မှာလည်း .…
ရုပ်ရှင်အတွက်ကကျတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် မလွယ်ဖူးပေါ့နော်။ သူက စည်းနဲ့ ဘောင်ကြီးနဲ့ ရေးရတာများတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတော့ ကြပ်တယ်။ သူက လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။ သာမန်ထက်ပိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်သီချင်းကျတော့ ရေးချင်သလိုရေးလို့ရတယ်။ ဆိုလိုတာကလွတ်လပ်တယ်။ ရုပ်ရှင်အတွက်ကကျတော့ ဇာတ်ညွှန်းတွေဘာတွေသေသေချာချာဖတ်ရတယ်။ အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့…
ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂျူဆာ လုပ်ပြီးရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ပိုပြီးအားရတဲ့ လွှမ်းပိုင်
လွှမ်းပိုင်ရဲ့ 'ကိုယ်စောင့်နတ်' ပြီးတဲ့နောက်မှာ ထပ်မံရိုက်ကူးမယ် ရုပ်ရှင်တစ်ကား ရှိပါသေးတယ်။ "သေချာတာကတော့ ကိုယ်စောင့်နတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ရယ်၊ ကိုထက်ရယ် (ဝင်းလွင်ထက်)၊ Red Radiance ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ တစ်ကားထပ်ရိုက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ကားကို ပိုပြီးတော့ နက်နဲတယ်။…
နိုင်ငံတော် အစိုးရက ဂီတနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း ဆုတွေ ချီးမြှင့်စေချင်တယ် ကော်နီ
အရင်တုန်းက ကိုကိုချစ်သီချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေ ပြေးမြင်မိကြတဲ့ အနုပညာရှင်ကတော့ ကော်နီပါ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဆေးသီချင်လို့ပြောရင် ပိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အနုပညာကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဂီတရေစီးကြောင်းမှာ လှုပ်ရှားလာတာနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်းက ချီးမြှင့်မယ့်…
အဲဒီ​တော့ တကယ့်​ Musician နဲ့ သူ့ဘာသာသူစန်းထပြီး​တော့ နာမည်​ကြီးတာနဲ့​တော့ မတူဘူး​ပေါ့။ ကျွန်​​တော်​တို့က အဲဒီလို စန်းထပြီး​ နာမည်​မကြီးချင်​ဘူး​ပေါ့​နော်​...
''ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်ရေး စတင်တည် ထောင်လိုက်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ခေတ်က တအား ကောင်းတဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူး။ ဗီဒီယိုကလည်း စုန်းစုန်းမြုပ်သွားပြီ။ အရင်တုန်းက ခေတ်ကောင်း တဲ့အချိန်တုန်းက ဒီအလုပ်တွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ ပရိသတ် တွေက လက်ခံခဲ့တယ်။ ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲ…
သီဆိုပြိုင်ပွဲ တစ်ခုက အကဲဖြတ်ဒိုင် အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ငြင်းပယ် လိုက်တဲ့ အဆိုတော် မင်းသား စိုးသူ 1,257 views
သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ စူပါပါဝါက ဘာလဲ 170 views
စက်တင်ဘာလ မွေးနေ့ထဲမှာ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်မယ့် ရှင်ဖုန်း 137 views
Line Walker-2 ဟောင်ကောင် အက်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မြန်မာပြည်က Hit-Man Killer တစ်ဦးနေရာက မြင်တွေ့ရမယ့် မင်းရာဇာ 125 views
ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးမရိုက်ဘဲ တစ်ကားဆို တစ်ကား ကောင်းအောင်ပဲ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ နေတိုး 67 views